दुर्गेशलाई सुसाइड नोट लेख्न कसले दिए पेन ? | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » दुर्गेशलाई सुसाइड नोट लेख्न कसले दिए पेन ?
दुर्गेशलाई सुसाइड नोट लेख्न कसले दिए पेन ?
ESAHARATIMES Wednesday, July 1, 2020 1 No comments
काठमाडौं असार १७ गते । बुधबार बिहान बलात्कारको अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा रहेका सिरहाको औरही गाउँपालिका –५ का २४ वर्षीय युवक दुर्गेश यादवले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीले दावी गरेको छ ।
आत्महत्या गरेका यादवको साथबाट सुसाइड नोट समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । ललितपुर परिसरका प्रवक्ता एसपी तुलबहादुर कार्कीका अनुसार यादवले अस्पतालको बिलमा सुसाइड नोट लेखेर छाड्नु भएको हो ।
हिरासतभित्र रहेका यादवलाई सुसाइड नोट लेख्न कलम कसले दियो ? प्रश्न उब्जिएको छ । ललितपुर परिसरका एसएसपी टेकप्रसाद राई भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई पनि थाहा छैन,’
पाटन अस्पतालको बीलको पछाडी पट्टी उहाँले सुसाइड नोट लेख्नु भएको छ । सुसाइड नोट लेख्नु भन्दा पहिले त्यही उहाँले त्यही बीलमा आलु क्रस गेम पनि खेल्नु भएको छ । सुसाइड नोट लेख्ने पेन कहाँबाट आयो त्यो प्रश्न उब्जिएको छ । यदि त्यो पेन दुर्गेशकै हो भने त्यो विर्को त्यहाँ छैन । यसमा प्रहरीले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
परिवारका सदस्यका अनुसार सुसाइड नोटमा यादवले ‘म माथि जुन प्रकारको आरोप लगाइएको छ । मैले त्यो गरेको छैन । म त्यस्तो सोच्न पनि सक्दिनँ । मबाट हुनै सक्दैन । यस्तो आरोप लागेपछि मैले समाजमा कसरी मुख देखाउन सक्छु ? त्यसैले यो संसारबाट बिदा हुन चाहन्छु,’ उहाँले सुसाइड नोटमा लेख्नु भएको छ ।’
एसएसपी राईले भन्नुभएको छ, ‘यादवको शव पोष्टमार्टमको लागि पठाएका छौं । रिपोर्ट आएपछि घटनाबारे थप अनुसन्धान हुनेछ ।’ सुसाइड नोटमा के लेखिएको भन्नेबारे प्रहरीले भने केही खुलाएको छैन ।
यादवमाथि एक महिलालाई मकैबारीमा बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो । यादव बलात्कारको मुद्दामा यही असार १४ गते ललितपुरको ग्वार्कोबाट पक्राउ पर्नुभएको हो । पक्राउपछि उहाँलाई हिरासतभित्रै क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो ।
यादवसँगै अन्य एकजना युवकले पनि महिलालाई बलात्कार गर्ने घटनामा मुछिएको छ । ती युवा को थिए, त्यसको पनि खोजविन हुनुपर्ने दुर्गेशका परिवारीक सदस्यको माग रहेको छ । दुर्गेशसँग त्यहाँसम्म कसरी पुगे, घटना आत्महत्यासम्म पुग्दा पनि त्यो केटा सम्पर्कमा आएको छैन । सम्पर्कमा नआएको कारण त्यो केटा पनि शंकाको घेरामा रहेको बताइएको छ ।
बलात्कार प्रयास भएकी महिलालाई समेत हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने यादवको परिवारको माग रहेको छ ।
बलात्कार भएको आरोप लगाएकी महिलाले दुर्गेशलाई पहिलादेखि चिनेको कुरा सहारा टाइम्ससँग भन्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, दुर्गेश मलाई पहिलादेखि नै पिछा गरिरहेका थिए तर मैले वास्ता गरेको थिइनन् तर अस्ती अचानक बाटोमा समाटेर मकै बारीमा लगेर बजारे ।’ साथीको कोठा डान्सको प्राइक्टिस गरेर फर्किने बेला त्यस्तो घटना भएको महिलाले दावी गर्नुभयो । महिला भन्नुहुन्छ, म ग्वार्कोमा दीदीको घरमा बस्छु ।’
एसपी कार्कीका अनुसार यादवले हिरासत कक्षमा रहेको तन्ना च्यातेर ट्वाइलेटको ‘भेन्टिलेसन’ मा झुण्डिएर आत्महत्या गर्नुभएको हो । ट्वाइलेटको भेन्टिलेशन र भूँइको दुुरी चार फिट होला, त्यसमा कसरी झुुण्डिन सक्छ भनि दुर्गेशको परिवारीक सदस्यले प्रश्न गरेको छ । प्रहरी भन्छन््, ट्वाइलेटमा छिरेको धेरै बेर भएपछि हामील ढोका फोडेर हेर्दा दुर्गेश झुण्डिएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ।’ विहान १० वजेको घटना हो । दुर्गेशलाई राखिएको कोठामा सीसी क्यमरा जडिछ । सीसी क्यामरामा २४ घण्टा प्रहरीको निगरानी हुन्छ । तर दुर्गेशले आफ्नो कोठामा सुसाइट नोट लेख्नुभएको । प्रहरीले भने अनुसार तन्ना च्यातेर डोरी बनाउनु भएको छ । यी क्रियाकलापमा प्रहरीले किन ध्यान दिएन । दुर्गेश ट्वाइलेट गएको याद गरेको छ तर आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिले गरेका गतिविधिमा प्रहरीले किन ध्यान दिएन भनि प्रश्न खडा गरेको छ ।
झ्यालमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि यादवलाई प्रहरीले तत्काल पाटन अस्पताल लगेको थियो ।
अस्पतालले उहाँलाई मृतक घोषणा गरेको हो । जिल्ला अदालत ललितपुरबाट असार १५ गते म्याद थप भई प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
Unknown July 1, 2020 at 6:07 PM
यो सब पुलिस को खेलमेल हो। साला घुस खोर प्रहरीहरु।